Kooxdayada naqshadaynta warshadaha ee ugu fiican iyo kooxda maaraynta alaabta ayaa u jira inay taageeraan baahidaada.
Barashada Suuqa:Si loo sii wado isbeddellada suuqa, kooxda suuq-geynta EASO waxay sameeyaan cilmi-baaris joogto ah oo warshadeed iyo suuq-geyn iyada oo loo marayo falanqaynta muuqaalka, daraasadda ganacsiga, sahaminta internetka iyo daraasadda warbixinta warshadaha iwm. Dhammaan aqoonta ayaa lagu dabaqaa tallaabo kasta oo naqshado cusub ah.
Naqshadaynta Alaabta:Waxaan diiradda saareynaa mashaariicda ODM/JDM ee ka bilaabma cilmi baarista suuqa, naqshad kooban, bixinta aqoonsiga, xaqiijinta aqoonsiga, horumarinta alaabta ilaa wax soo saarka ballaaran iyo rarida ugu dambeysa.Hadafkayagu waa inaan siino mid kasta oo ka mid ah macaamiisheena alaabada saxda ah ee suuqyada.
Abaalmarinta Nakhshadeynta:Waxaa naloo aqoonsaday "Xarunta Naqshadeynta Warshadaha Gobolka Fujian" shirkaddayada waalidka ah ee Runner Group waxaa lagu sharfay "Xarunta Naqshadeynta Warshadaha Qaranka" oo aan awoodno inaan wadaagno kheyraadka naqshadeynta ee goobaha.
Tubada qubeyska, Roobka Delta, Tubooyinka Qubeyska ee Kaydka Guriga, Tiirka Qubeyska, Tuubada Qubeyska, Qashinka Dooxada,